Thola ukuthi ungawakhetha kanjani amahhotela angcono kakhulu ongaya nezingane | Izindaba Zokuhamba
Ungawakhetha kanjani amahhotela ozohamba nezingane
USusana Garcia | | Ukuhamba nezingane
Ukuhlela uhambo lokwenza njengomndeni kungaba nzima kakhulu ngenxa yazo zonke izinto okufanele sizicabangele. Kubaluleke kakhulu ukuthi kokubili indawo yokuhlala nendawo yokuhlala ivumelane nezingane nabantu abadala ngokulingana ukuze wonke umndeni ukwazi ukujabulela lolu hambo. Ukukhetha amahhotela amahle kakhulu ezingane kunzima, ikakhulukazi uma singazi ukuthi yini okufanele siyibheke.
Ngokulandelayo sizokutshela ezinye zezinto okufanele uzibheke kufayela le- ihhotela elihle lemindeni enezingane. Kubalulekile ukuba nalezi zinsizakalo namaphuzu kucace bha ukwenza usesho oluthile nokulahla amanye amahhotela nezindawo zokuhlala ongahlala kuzo.
1 Khetha indawo oya kuyo
2 Izaphulelo zezingane
4 Izikhungo zezingane
5 Iklabhu yengane
7 Izinsizakalo ezikhethekile
8 Ukuphepha kwehhotela
9 Isevisi yokugcina izingane
Kubalulekile ukukhetha indawo enhle oya kuyo wonke umndeni. Bangu izindawo ezijwayeleke kakhulu ngakho-ke kuzoba lula kakhulu kithina ukuthola amahhotela analolu hlobo lwezinsizakalo ezibhekiswe kwabancane. Indawo okuyiwa kuyo kufanele ihehe wonke umuntu, kungaba ngenxa yemisebenzi noma izindawo ongazibona. Ezimweni eziningi, kufunwa amahhotela lapho izingane zijabulisa khona ngaphandle kokubheka ukuthi yini okufanele ibonwe lapho iya khona. Konke kuncike ohlotsheni lwezokuvakasha esifuna ukukwenza nomndeni.
Kumahhotela amaningi banikela ngezaphulelo zezingane. Baningi futhi abahlinzeka ngendawo yokuhlala yamahhala izingane ezingaphansi kweminyaka eyishumi nambili. Kunoma ikuphi, kufanele ubheke kahle izimo ukuze usebenzise ngokunenzuzo futhi uhambe ngentengo ephansi. Ngaphezu kwalokho, uma kwenzeka ungumndeni omkhulu, izinto ziyinkimbinkimbi, ngoba lokhu kunikezwa kuvame ukuba kube yimindeni enengane eyodwa kuphela.
Kubalulekile ukukhetha amakamelo. Lokhu kungaba okwabiwe nabazali babo noma zingabuye zithunyelwe uma izingane sezivele zikhulile. Kuyadingeka ukubona ukuthi banemibhede eyengeziwe uma kungenzeka babe ngaphezulu kwengane eyodwa nokuthi banikeza imibhede yezingane, ngoba ngale ndlela kungenzeka ukonga ukuhamba ngombhede wokuhamba.
Kuwo wonke amahhotela omndeni imvamisa banezinsiza zokuthi izingane zijabule futhi zihlale zijabule. Lezi zikhungo zingaba khona izinkundla zokudlala ngaphakathi nangaphandle, amachibi ezingane, amapaki amanzi, amagumbi wethelevishini noma ama-video game. Kufanele ufune ihhotela elinokuzijabulisa kwezingane futhi ikakhulukazi ubheke ukuphawula kwabahambi nezithombe ukubona ukuthi ngabe ziyizinsiza ezanele yini zabancane.
Amakilabhu ezingane angumbono omuhle wokuthi izingane ziwujabulele. Kulezi abanazo imisebenzi eyenzelwe ibanga leminyaka yabo, imidlalo nabasebenzi abayinakekelayo ngenkathi abantu abadala bengajabulela izakhiwo zehhotela njenge-spa. Kumahhotela amaningi, amakilabhu anezinhlobo zeminyaka, ukuze izingane zingahlukaniswa ngeminyaka ukuze zinikezwe imisebenzi ngokwesigaba sazo. Le ngenye yezinsizakalo ezithakazelisa kakhulu lapho ukhetha ihhotela.
Yize iningi lamahhotela amakhulu amamenyu ekhona kuhluka ngitsho kuma-buffetsKumahhotela amaningi asebenza njengomndeni anamamenyu ezingane. Ngale ndlela, abazali bazisindisa ekubhekaneni nezingane ezingafuni ukudla izitsha ezingazazi. Kwamanye amahhotela kukhona ngisho nabasebenzi abanakekela indawo yezingane ukuze abazali badle ngokuthula ngenkathi izingane zijabulela ukudla endaweni yazo.
Amahhotela amaningi anikezela ngezinsizakalo ezikhethekile zezinsana kanye nentsha. Izinsizakalo zivame ukugxila ezinganeni esezikhulile, zikhohlwe ngezinsana noma intsha. Kodwa-ke, amanye amahhotela anikezwa ngemininingwane ethe xaxa obhasikidi bezingane zokugeza nezindatshana zabo, imibhede noma izihlalo eziphakeme uma uceliwe. Kukhona namahhotela lapho bacabanga ngentsha futhi banemisebenzi ethile abayidingayo njengezindawo zemidlalo yamavidiyo, izingxoxo zokucobelelana ngolwazi noma imisebenzi yezemidlalo.
Ngaphandle kwemisebenzi engachazwa emahhotela, kuyadingeka ukuthi kucatshangelwe ukuphepha ehhotela. Kufanele ubhekisise ifayela le- ukuphawula ngenhlanzeko yendawo, kanye nasezithombeni. Ukuthi kuvulandi noma amawindi aphephile, amaphaseji ikakhulukazi izindawo zezingane, kusukela kumachibi okubhukuda kuya ezikhaleni zokudlala. Kunamahhotela amaningi ahlinzeka ngezinsizakalo kepha awabheki lezi zinhlobo zemininingwane ezingabaluleka lapho uhamba nezingane ezincane.
Isevisi yokugcina izingane
Le yinkonzo abazali abaningi abafuna ukuba nayo ehhotela ukuze bakwazi ukujabulela usuku noma ubusuku ngaphandle kokukhathazeka ngezingane. Kufanele njalo qiniseka ngohlobo lwensizakalo Lokho abakunikelayo, uma kungokwehora nokuthi ngubani onakekela izingane. Ungashayela ihhotela ukuthola eminye imininingwane ngale nsizakalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Ukuhamba nezingane » Ungawakhetha kanjani amahhotela ozohamba nezingane
Izindawo ezi-6 ePyrenees yaseCatalan okufanele uzithole
Okufanele ukwenze eBenidorm